Ubuhle - ingabe esesweni lombukeli? Isikhathi sokubukeka
Ingonyama ilele ehlathini futhi ilandele ihabhu, eliqhaqhazela ngokungahambisani nokhula owomile. Isilwane sidlula phambili nge-jerk futhi ukuzingelwa kuqala. Ungabona imilenze yakhe yemisipha iphoqa emhlabathini ngamandla amakhulu. Sikhuluma ngobuhle.
Ingonyama isilwane esihle, esihle kakhulu. Kodwa ubuhle buyimbali emibalabala, ngakho-ke iyinkimbinkimbi futhi ihlala isikhathi esifushane lapho ikhona.
Umbhangqwana othandweni ekushoneni kwelanga - kuhle, kwesokudla?
Noma kunjalo, siyajabulela iphunga lakhe nezimbali zakhe ezimibalabala. Zombili lezizinto azifani kakhulu, kodwa nokho sihlanganisa igama elithi "ubuhle" bobabili.
Kungani lokho? Kungani sibiza zombili izilwane eziyingozi futhi ezihle kakhulu futhi imbali encane futhi encane enhle?
Ubuhle bungumqondo ongaqanjiwe namanga esweni lomboni. Ngakho-ke, sizizwa izidalwa ezihlukahlukene kakhulu njengezinhle. Ubuhle umzwa obangelwa ukubona nokubona.
Isimiso, ubuhle esweni lomboni, kodwa futhi libala nangenye indlela nxazonke. Ngalo mqondo, wonke umuntu unobungane obuhle kakhulu kuye. Omunye ukhuluma nobuhle bangaphakathi.
Lokhu kungaba ukumomotheka, ukubukeka okukhohlisa noma isenzo esithile. Noma zonke lezi zinto ngesikhathi esisodwa. Wonke umuntu unhle. Futhi wonke umuntu ufuna ubuhle bakhe bubonakale.
Akukho ubuhle ngaphandle kokubonga
Ukuze ukhiqize ubuhle bomuntu siqu futhi obusondelene kakhulu, wonke owesifazane nowendoda kumele baqale babone futhi baziqaphele ngokwabo. Uma umuntu ebonisa ukuthi uhle, kudala imizwa eminingi kwabanye abantu.
Umuntu ubukeka ekhangayo, enomusa futhi enhle. Yilobu buhlobo obukhethekile obuphendulela umuntu olula abe umuntu omuhle. Siyamthanda ngothando lomuntu.
Sivumelana kahle nomuntu onomusa ozwelayo. Siyamomotheka kumuntu ongaziwayo emgwaqeni ngoba usenza sizizwe sishisekile.
Ubuhle bukhona kuwo wonke umuntu
Wonke umuntu unhle. Zonke izidalwa zinhle. Ngendlela yakhe, zonke izithombe nazo zonke izimo zinebuhle bomuntu siqu futhi obuhle kulo.
Ukuqaphela, ukuveza nokuphila ngisho nalokhu kuyi-art. Ubuciko obukwazi ukufundwa kuphela ngokubambisana nogqozi.
Ukwenza okuhle kusho izindlela zokuzithandela. Futhi uzihloniphe wena kanye nabantu bakho abantu uhlinzeka ukushisa futhi ubuhle obuhle.
Ikhofi - Indaba yesiphuzo esithandwa kakhulu
Amakhredithi okuzivocavoca Ubulili - Anatomy of Man